Ngaliphi iphuzu emlandweni wesintu sesintu, kubonakala kunzima ukukusho, kodwa kuyaziwa ngokuthembekile: umlando wayo wawugcwele izindabakwane ngaphambi kwesikhathi esisha. Kukhulunywa nakakhulu ekuthumeni kukaHammurabi ngokuphathelene nokujeziswa kokungasebenzi okungafanele, ukukhiqizwa kwezinga eliphansi nokuhlinzeka.
Kusukela ezikhathini zasendulo, abantu babesazi umqondo wokulinganisa futhi bayakwazisa ukuphulukiswa kwalesi siphuzo, nakuba ngokuhamba kwesikhathi bafunda indlela yokukhiqiza izinhlobo ezihlukahlukene zebhizinisi le-velvet kusukela ekukhanyeni, emnyama, kwe-caramel emnyama nakwabanye.
Izindaba zebhiya nezinkwanekwane
Ngesinye isikhathi, izilwane zasendulo zashiya ibhodlela lebhali elangeni ukukhohlwa, futhi emva kwesikhashana, ngemva kwemvula nezinsuku ezishisayo, bathola ukulahleka, kodwa bahlonipha izinga lephuzo elitholiwe ...
Uma nje umpi wasendulo, edumala yimpi, wabuya ekhaya ukuhlwanyela imbewu emasimini ezitshalo futhi waphonsa ingubo emanzi ebhodini lokusanhlamvu, futhi emva kwezinsuku ezimbalwa umkakhe wathola uketshezi ngezansi ngephunga elimnandi nelinambitheka ...
Uma ezinye izingcaphuno zomlando zichazela izingcezu zomlando walezi zindlela noma ezinye zokupheka ekukhiqizeni iziphuzo kanye nemikhiqizo yokudla, umuntu angakwazi ukuchaza ngokukodwa into eyodwa kuphela: ekuqaleni kokungumlobi wabo. Indoda yayisisetshenziswa nje kuphela ngezandla zayo ezihlakaniphile.
Kodwa, kungakhathaliseki ukuthi kwasekuqaleni, iresiphi yesimanje yebhizi le-velvet, ngakwesinye isikhathi, iqoqo lezinhlanzi ezihlukahlukene, inhlanganisela yezithelo zomvini, izithelo, isinkwa nemvubelo. Kwesinye isikhathi, iresiphi idlulisa amazinga ahlukene okugaya ama-malts ahlukene, ihlanganisa ukuvutshelwa okuphezulu nokuphansi. Esimeni lesithathu, kuphakanyiswa ukuba ugaye iqoqo lezithako zibe ufulawa, ugcwalise emgqonyeni, ufake imvubelo, uthele amanzi uphinde uhlale phezulu ukuze ukhiqize ngcono.
Ngokwemvelo yezinhlobonhlobo zamabhiya kanye nethuba langempela lokuhlukanisa phakathi ubhiya obukhanyayo nobumnyama nokuhlukanisa phakathi kwazo zonke i-velvet ubhiya, kungathiwa ukuthuthukiswa kokukhiqizwa kwezimboni nokukhiqizwa ekhaya kwenza ukuba kube nolwazi oluningi nolwazi oluhle.
Ama-monasteries kanye nezimfihlo zebhizinisi lebhiya lomndeni
I-breweries ikhona kusukela ezikhathini zasendulo, futhi ibhizinisi lebhiya linikeza ukuhleleka okunembile komphumela wefa. "Isidleke ngasinye se-ubhiya" sinomvuzo wawo kusuka kumkhulu noma ugogo, okuyizinzalo ezivikelwe ngokucophelela futhi ziqhubeka ziqhubeka ngcono.
Ama-breweries ayenomphumela wendawo, amagama abo nemikhiqizo ayengavunyelwe ukuhamba phesheya. Intshisekelo yamakhomishana ebhizinisini likabhiya yayiyi-prosaic eyengeziwe futhi ingokomoya nomnotho. Izinhlobo eziningi ze-monastic zezinyosi ziheha abahambahambayo, njengobusi buheha izinyosi: kungani uhamba ngezimbali, lapho ungazihlanganisa nesoso.
Ubhiya be-monastic, naphezu kwezinhlobonhlobo zokuthanda, izindlela zokukhiqiza nezimfihlo zamakhulu eminyaka, kudonsela ukunakwa kwengqondo, nakuba kungashiwo ukuthi ukuvakashela noma iyiphi i-monastery ngeke kumthande lowo muntu.
I-brewery noma i-monasteri ingahlelwa kalula ekhaya lakho. Izophakamisa ukulinganisa phakathi kwabahlobo, ukuheha omakhelwane, ukukhulisa izinga lolwazi nokuqinisa impilo. I-velvet yasebhiya, emnyama noma cha, ephekwe ekhaya - yindlela eningi yokukhetha ubuciko, ayikho indlela ephansi kunentshisekelo kumakhambi, izinhlobo zetiyi, ukusetshenziswa kwezinye izinsiza zemvelo.
Ukuphuza ngokweqile nokushesha
Iwayini nebheja ngemuva kwe-vodka ne-cognac - kufana nebhizinisi elincane ngokumelene nengemuva enkulu. Kodwa-ke, amanani okusetshenziswa akufani.
Noma kunjalo, wonke umuntu unendlela yakhe, futhi ubhiya we-velvet unamathuba angenakuphika. Akuhlali njalo usebenza umthetho jikelele, uma "imali emoyeni": ngezinye izikhathi ungabeka yonke into ebhiya kuphela.
I-velvet yasebhiya, ebumnyama, elula futhi e-"Folk" e-Belarus, ikakhulukazi, ekushintsheni kwe-epochal kusukela kuma-80 kuya kweya-90 - kuyisibonelo esikhethekile.
Futhi "i-Old Castle" yayiyizinhlobonhlobo zokukhanya, yena, kanye neVelvet, Green noTroitsky, behamba nezinqubo zenkululeko yentando yeningi ema-90s amakhulu.
Lapho iBaltika, u-Obolon noChernigov bevela emakethe, futhi izinhlobo eziningi ezingavamile zanikezwa, umkhiqizi waseBelarusian waqhubeka nokujabulisa izwe lakithi kanye nezimakethe zangaphandle ngezinhlobo ezintsha nokukhula kwekhwalithi ngangokunokwenzeka.
Mayelana nezinzuzo namanani
UBulgakov wayenembile lapho ekhuluma ngezindebe zikaProfesa Preobrazhensky: "Kumele siyazi ukuthi singaphuza kanjani." Kubalulekile ukwazi ukuthi nini niphuza nini futhi nini. "
Ukwakheka okuyinhloko kokulungiselela ubhiya: amanzi alungisiwe, i-malt elula, i-caramel malt, ushukela, ama-hops-lokhu kuvame ukubhalwa kule ilebula. Nokho, ngokusebenza, okulandelayo kusetshenziselwa:
I-malt ye Rye, ukolweni wekolweni,
Isinamoni, isiraphu ushukela, uju, omisiwe,
Lokhu akukona okuphelele futhi akuyona kuphela ukwakheka kokwenza ubhiya. Ukuhlukanisa phakathi kokuvutshelwa phezulu nokuphansi, inqubo yokuhlunga nokulungiselela ukubunjwa kokuqala, ukufakwa kwamanzi kanye neminye imininingwane yobuchwepheshe kubalulekile.
Umkhiqizi unqikaza ukudalula izimfihlo zabo zokupheka kanye nobuchwepheshe. Kodwa-ke, kuyabonakala futhi kubalulekile ukuthi ukwakhiwa kwebhiya kuyimvelo, akukho lutho olulimazayo empilweni, kodwa kukhona izinto eziwusizo. Konke okudingayo ukwazi isilinganiso.
I-velvet yebhiya izokwehlisa ukucindezelwa kwegazi, ithuthukise ukugaya igazi kanye nomzimba, umphumela omuhle emzimbeni, ngoba ususa kalula ubuthi kanye nobuthe.
Ngezindleko, le bhiya ibilokhu ibiza okungaphezu kuka "Zhigulevsky" noma isiphuzo esilula, kodwa ngaphansi kwesithwala noma enye ibhiya elimnyama. Intengo yayilokhu igxile ensimu, ukulethwa kwezidingo futhi incike kancane ekukhiqizeni inqubo. Eqinisweni, ezimweni eziningi, ubuchwepheshe nezindlela zokupheka zifana.
Mayelana nomonakalo nesiqubulo
Kulimaza konke lokho okuningi. Ngakho-ke, leli gama elithi "Utshwala liyingozi empilweni" akuyona into engelusizo lwentuthuko ye-Ministry of Health. Ukuphuza utshwala yisifo senhlalakahle, esinezici zesithakazelo sombuso.
Okokuqala, njalo ukukhula okukhulu nokuzinzile kwesabelomali.
Okwesibili, kukhona ithuba lokudala imisebenzi: amakamelo okunakekelwa kwezidakamizwa, imitholampilo nezindawo zokusebenza okuzosiza umphakathi udoti.
Okwesithathu, kunesizathu sokuxoshwa okuphikisanayo noma ukushintsha izinto eziza kuqala kunoma iyiphi enye inqubo yomphakathi.
Kuneminye imibono eminingi yokuthi ungazuza kanjani ekuphuzeni utshwala, futhi ubhiya akuyona umholi ophawulekayo ekusezingeni.
Utshwala luyisivivinyo kumuntu. Ababuthakathaka bayokuya ngokushesha e-White Castle, futhi amandla aqinile azobhekana nawo, noma ngabe anikezwa nsuku zonke, futhi nsuku zonke, isibonelo, ukuze akhiphe ulwazi oludingekayo, ngakho-ke onamandla ngeke athole okuningi, futhi impilo yakhe ngeke ichithe okuningi.
Ngokwalo, igama elithi "I-velvet ye-Beer" ayizwisi njengokuthi "Okuhlaza", "UZiqu-zintathu", "I-Old Castle" nendabuko, noma ikhanya, "Zhigulevskoye". Kodwa ukunambitheka kuyahluka ngokuphawulekayo. Ebhizinisini lokuphuza, umqondo we-gourmet, connoisseur noma u-taster umqondo ongeyena obala, kodwa ubhiya we-velvet ungahlukaniswa yiwo wonke umuntu.
On ubhiya oyilungu
Lapho intando yeningi ingena esikhundleni se-stochastic character ibe izwe elibhekene nezimo eziphuthumayo futhi liphuthumayo esikhundleni samandla amakhulu amakhulu, izimpumelelo zakudala zenhlalo yezenhlalakahle ngokwemigomo yokuma ukuphuza izikhungo "Amanzi, amanzi" asuke angena esikhathini esidlule.
Ubhiya obuhlelwe njalo bewukhona, kodwa hhayi njalo wanikelwa emphakathini wamasiko. Uma umuntu noma inkampani isebenzisa utshwala ngendlela ephuthumayo, ngaphambi komsebenzi noma ngemuva, noma ngaphambi kokubuyela ekhaya, noma omunye umuntu ogijima ngokushesha ukuze aqede ukucindezeleka - lokhu kuyindlela eyodwa. Lapha awunaso sonke isikhathi sokuthola ukuthi yini ongayithatha: i-velvet yobhiya, omnyama noma i-corny, okungukuthi.
Uma ngabe lo mcimbi uhlelwe kusengaphambili, kuvunyelwe futhi ugcinwe endaweni ehloniphekile, ngakho-ke, kungcono ukusebenzisa umdwebo, kepha hhayi ukuhlanjululwa njengaphansi kwamaSoviet, futhi mhlawumbe ngisho nokungahlanganiswa, ngokuqondile kumkhiqizi, esakhiweni sakhe sokuphuza esihloniphekile.
"Baltika" ekusebenzeni kwe-velvet
Mhlawumbe, i-tin ingahlala kude phesheya kakade ifinyelela incazelo njengesiqukathi esikahle sebhiya, kodwa ezweni labazali liye laba isibonelo esihle sokufinyelela umphumela omuhle wezomnotho. Kusukela ukuthululela ubhiya obumnyama emanzini amathini, iBaltika njengomkhiqizi webhiya wazuza ngokushesha amaphuzu.
Ukuhlonza kwemikhiqizo yangempela: "okuyingqayizivele", "troika" nelithi "eziyisikhombisa" ngokushesha yaba yizinhlelo ezivamile.
I-velvet yobhiya ebumnyama kwasekuqaleni yayinomphumela wokuqala: kwakungenzeka ukuhlala ngokuphelele enkampanini, njengokungathi kuncane kangakanani futhi hhayi ukuphuza ukuphuza, kepha lapha ukuvuka ngehora noma emibili kwakuyinkinga. Imilenze yami yavele yenqaba ukusebenza.
I-velvet yobhiya obumnyama "i-Baltika"
Ukubuyekezwa kwabalandeli bephuzo eliphoqelekile kuyisimangaliso (noma kunjalo, kungokwemvelo kunoma yimuphi umuntu ukuba abe nemibono yakhe), kodwa konke kuvumelana ngento eyodwa: kukhona into enhle, futhi kukhona okubi. I-Ministry of Health ne-block yayo ye-jaded yokukhangisa kanye nombono womphakathi kanye nomqondo wayo ongenangqondo mayelana nezingozi zokuphuza utshwala ngokujwayelekile futhi obuthakathaka ngokukhethekile akuthinti impendulo nganoma iyiphi indlela.
Njengoba izitatimende zezinhlawulo ezivamile zingabonakali isimo seqiniso, zihlaziya imibono ehlukahlukene yemigomo, umuntu angasho ukuthi: abathandi bayayiqaphela kuqala ukunambitheka (i-caramel, i-sweet, isinkwa, uju, ...), umbala - uthi i-velvet inombala omnandi, abaningi babhekisela Amber. I-Foam ku-velvet ubhiya iyigugu, wonke umuntu uthi lokhu.
Abantu asebekhulile, ikakhulukazi abathandi bama-cottage ehlobo kanye nabaqoqi bemithi yokwelapha, baqokomise izindawo eziwusizo zobhiya. Futhi nakuba le ngxenye yokubuyekezwa ifana kakhulu nokukhishwa kwezinjini zokusesha ze-inthanethi, kufanele kuqashelwe ukuthi kokubili ubhiya kanye nakulezi zibuyekezo ulwazi olufanele luqukethwe.
Abathengi abasha bebhiya (yobudala bomfundi) abafisi ukuhlukanisa ububanzi bombala, ukunambitha, kepha ukuphatha imiqulu kanye nomphumela owenziwe. Izibuyekezo zikhumbuza umlando wepikinikini, uhambo lokudoba noma imvelo. Inambitheka yobhiya nombala wayo impela ngemuva, okokuqala - konke okunye.
Impendulo evamile yilokhu: uma unqume ukuzama ubhiya we-velvet, umnyama, uchithekile, ukheniwe, ubhaliswe ngamabhodlela noma kungenjalo, kungcono ukukwenza ngendlela yokunambitha, unake umbala nophuphu, ungakutholi lobuningi, kodwa ugxile esikhathini nangoveli .
Iwayini eliqinile: umlando nomkhuba
Sikaphalafini ngoba izitofu kagesi: izinhlobo kanye nezici
Uyini phenotype? Concept, izici eziyisisekelo nokuxhumana genotype
Blueberry Garden - esiphundu futhi unempilo
Ezikhumbuzo Muslim ku ithuna
Ungavimbela kanjani ukulahleka kwezinwele kumakhambi omuntu wesifazane?